Best iPhone File Manager maka Windows & Mac
> Resource> iPhone> Best iPhone File Manager jikwaa iPhone faịlụ
iTunes bụ iPhone Njikwa faili na iPhone ọrụ nwere ike iji ụbọchị ọ bụla. Ọ arụ ọrụ dị ukwuu n'ihi na ọrụ na ịnweta iTunes Store ịzụta faịlụ na mmekọrịta ka iPhone. Otú ọ dị, ọ na-apụghị enyere ndị ọrụ jikwaa iPhone faịlụ anya, ma ọ bụ na anyị asị, na na iPhone. Nke a bụ ebe ọ dara mkpụmkpụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ a keukwu Njikwa faili maka iPhone jikwaa faịlụ na iPhone mfe na rụọ ọrụ nke ọma, m na-atụ aro ị na-agbalị Wondershare TunesGo. Ọ na-eme ihe iTunes nwere ike na ihe iTunes ike.
Gbalịa iPhone Njikwa faili ikpe mbipute ugbu a!
Cheta na: Ma Wondershare TunesGo (Windows) na Wondershare TunesGo (Mac) dị. Na-ahọrọ nri otu maka gị na kọmputa.
Best File Manager maka iPhone-eme ihe iTunes nwere ike ọ bụghị!
Wondershare TunesGo bụ ihe kasị mma iPhone Njikwa faili. Ọ na-eme ihe iTunes nwere ike ọ bụghị!
Wughachi iTunes Library na music si iPhone ke otu click. Gụọ nkọwa maka otú nyefee iPhone music ka iTunes Library;
Back elu họrọ songs, videos, na listi ọkpụkpọ na iPhone ka iTunes Library; [Nanị dị na Wondershare TunesGo (Windows)]
Export iPhone music, vidio, na foto kọmputa;
Tọghata iPhone kedi videos na music ka iPhone enyi na enyi formats n'oge na-ebufe usoro;
Export Ndi ana-akpo na SMS si iPhone na kọmputa; [Nanị dị na Wondershare TunesGo (Windows)]
Export Ndi ana-akpo si iPhone ka vCard faịlụ, Outlook, Windows Address akwụkwọ ahụ, na Windows Live Mail; [nanị dị na Wondershare TunesGo (Windows)]
Ịmepụta listi ọkpụkpọ na foto ọba iji iPhone kpọmkwem site kọmputa;
Hichapụ music, videos, playlist, foto, na foto albums si iPhone;
Na atụmatụ ndị a n'elu, ị nwere ike nyefee faịlụ site na iPhone ka iTunes Library ma ọ bụ kọmputa mfe maka ndabere. Atụmatụ ndị a bụ nnọọ uru mgbe ị ịgbanwee gaa na ọhụrụ kọmputa ma ọ bụ hapụ faịlụ na iTunes Library.
Best iPhone File Manager-eme ihe iTunes nwere ike!
Wondershare TunesGo-emekwara ihe iTunes nwere ike. Na ya, i nwere ike nyefee faịlụ site na kọmputa na-iPhone dị ka mma.
Nyefee music, vidio, na foto site na kọmputa na-iPhone;
Mmekọrịta Outlook na Windows kọntaktị na iPhone;
Ọ bụ ezie na Wondershare TunesGo-eme ihe iTunes nwere ike na ike, ọ bụ iTunes enyi. Right now ọ na-apụghị ka ị nyefee akwụkwọ na kọmputa na-iPhone nke iTunes nwere ike. Na nke a iPhone File Manager App na iTunes, ị ga-nwere mma ahụmahụ na-eji gị iPhone.
Gbalịa Wondershare TunesGo - kacha mma iPhone File Manager
Cheta na: dị ka m na e kwuru n'elu, Mac version bụghị Ẹkot ka Windows version. Ugbu a Wondershare TunesGo (Mac) nanị na-akwado music, vidio, na photos. Ugbu a Mmepe na-arụ ọrụ siri ike ka mma ya, na-enwe olileanya na-esote version ga-abụ ihe ike.
Na-ekiri ndị Video ịhụ ihe iPhone File Manager nwere ike ime ka Ị